Shina HEVENTY STEEL STEEL ary mpanamboatra | Histar
Tady vy haingam-pandeha Rolled Round bar
Bara fisaka haingam-pandeha haingam-pandeha
Blaogy maty novonoina vy haingam-pandeha
Takelaka vy haingam-pandeha
Fiatrehana akanjo tena tsara
Ny vy vy haingam-pandeha dia nomena anarana hanehoana ny fahaizany manohitra ny fanalefahana amin'ny maripana ambony noho izany mitazona sisiny maranitra rehefa mavesatra ny fanapahana ary avo ny hafainganam-pandeha. Izy ireo no be mpampiasa indrindra amin'ireo karazana vy vita amin'ny fitaovana. Mazava ho azy fa misy tungsten na molybdenum, chromium, Cobalt ary vanadium, miaraka amina karbonika.
Vondrona roa no misy: Karazana molybdenum sy karazana Tungsten
NY MOLYBDENUM haingam-pandeha haingam-pandeha haingam-pandeha dia misy molybdenum 3,50 hatramin'ny 9.50%. Izy ireo dia ahitana tungsten 4,00%, ary vanadium 1,00 ka hatramin'ny 5,00%. Somary avo dia avo ny karbaona - 0,80 ka hatramin'ny 1,50%. Ny rindrambaiko dia manarona fitaovana fanapahana isan-karazany. Ohatra amin'izany ireto: drills fihodinam-bolo, reamers, fanapahana fikosoham-bary, fitaovana fanaovana latina ary planina, antsy fanapahana, ary fampidiran-jiro.
NY TUNGSTEN haingam-pandeha haingam-pandeha haingam-pandeha manana tungsten 12.00 ka hatramin'ny 20.00%. Izy ireo koa dia manana chromium sy vanadium be dia be, ary ny sasany kosa manana kobalta betsaka. Avo ny karbaona - 0,70 ka hatramin'ny 1,50%, miankina amin'ny naotiny. Ny fampiasana fitaovana dia misy bits, drills, reamers, paompy, broach, fanapahana fikosoham-bary, hobs, totohondry ary maty.
STEEL STEEL avo indrindra indrindra Nomena nomenay:
METY x LALANA xLENGTH IN MM
100-610MM DIA X1.2-10MM matevina
Fifangaroana tsara amin'ny fanoherana ny akanjo, hamafiny ary hamafin'ny hafanana. Hamafin'ny famoretana avo lenta ho an'ny fanoherana ny fahasimbana, mampihena ny fahatsapana ny, ny fikorontanana ary ny rollover amin'ny sisiny.
Ho an'ny karazan'akanjo fanoherana fanoherana rehetra izay mihetsiketsika, toy ny fitaovana Lathe, fitaovana Planer, Drills, Taps, Reamers, Broaches, Cutter fikosoham-bika, fanapahana endrika, chasers kofehy, fikosoham-bary, fanapahana girara
Cobalt nanampy vy mahery hafainganam-pandeha M2 izay manome ny hamafin'ny hafanana ny fanampin'ny kobalta, ny hamafin'ny hafanana nohatsaraina dia mahatonga ny vy hiasa tsara amin'ny fametahana vy mahery sy vy efa vita hatry ny ela, firaka matevina avo
Fampandehanana miolakolaka, paompy, fikosoham-bary, reamers, broach, tsofa, antsy ary hobs.
Vy haingam-pandeha haingam-pandeha avo indrindra miaraka amin'ny hamafana avo indrindra sy ny hamafin'ny hafanana ambony, ny fanoherana tsara amin'ny hatsaran'ny hafanana avo lenta, mijanona ho maranitra sy mafy amin'ny fampiharana fanapahana andraikitra mavesatra sy avo lenta
Ho an'ny fitaovana fanapahana sarotra sy marina ho an'ny fanapahana mafy sy haingam-pandeha, fandavahana, paompy, fanapahana fikosoham-bary, reamers, broach, tsofa, antsy ary kofehy mihodina.
HSS mifototra amin'ny tungsten, fifangaroana henjana sy hamafin'ny mena. Fanoherana avo ny akanjo sy ny fanalefahana. Mora manamafy.
Fampandehanana miolakolaka, fitaovana fanapahana visy, fanapahana fikosoham-bary, paiso fanapahana rakitra, fitaovana fanoratana, fitaovana planer, fitaovana hoharatana.
Previous: RIASA ASA MASINA
Manaraka: VOLOMBELOKA VOAFETRA HOLLOW BAR 1.2344-H13
Distributer vy haingam-pandeha
Stockiest haingam-pandeha haingam-pandeha
Mpamatsy vy haingam-pandeha
Famatsiana vy haingam-pandeha
Hss M35 Boribory Saw Saw, Hss M2 Boribory Saw Blades, Tct Boribory Saw Saw, Fitaovana fiasan-damba mafana vita amin'ny vy vita amin'ny vy, Tct Circular Saw Blade Fa Metal, Tct Circular Saw Blade,